Faucet Fangaro amin'ny Nickel Ramatoa miaraka amin'ny Pull Down Sprayer
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets ao an-dakozia / WOWOW Fangaro mixer ao an-dakozia Misintona Nickel borosy
WOWOW Kitchen Sink mixer Tapaka Pull Out Spray Nihanaka Nickel
naoty 4.93 avy tany 5 mifototra amin'ny 54 mpanjifa naoty
(54 mpanjifa famerenana)
Namboarina ho an'ireo izay maniry ny fifangaroana tsara ny haingon-trano ankehitriny, ny fampiasa ary ny kalitao tsara indrindra. Ny famolavola arc spout amin'ny grôte amin'ny savika an-dakozia dia manome endrika tsy misy fotona sy tsara tarehy. Manampy amin'ny fehin-kibo vita amin'ny nela-molotra izay manome lanja ny endriny madio sy minimalist ary ny volafotsy madio. Fanampiny mahafinaritra ho an'ny lakozia ankehitriny!
2311601 torolàlana fametrahana
Endrika tsy manam-paharoa: mofom-boaka ho an'ny lakozia 2311601 natsangana toy ny Sink Tambahan, ny fototra dia tery amin'ny tendany ary Broad amin'ny Andranony, ity Layout ity dia misoroka ny fofona rehefa mihodina, ary koa ny fehin'ny savony any an-dakozia any an-dakozia. , Omeo vitsy ny fahatapenanao ny lakozia
Modely fametrahana 3: Feno / mikoriana / famafazana, ny fikorianan'ny hery mahery vaika dia afaka mameno haingana ny zorony, manasa ny zoro falifaly tsirairay, ny fomba famafazana amin'ny alàlan'ny fikorianan-tsolika sy mitohy handrotsahana moramora ny voankazo sy legioma, ary koa ny fomba fiatoana dia mampiato ny rano ao anatiny misy fotoana manokana hitehirizana ny rano, ny mahasoa ary ny fitsitsiana angovo
Kalitao avo lenta: ny fantsom-baravarankely nikosoka vita amin'ny vy dia misy mpampitambatra vy vita amin'ny vy varahina avo, miantoka fa ny fenitry ny rano tsy misy mineraly ary mitarika hahazoana rano azo antoka, gropy vy / vy tsy misy vy azo antoka dia manome antoka ny hery mahery vaika, azo iorena sy maharitra.
Faritra lehibe misasa: Fandroahana an-dakozia ao amin'ny 1.5 m (lava tanteraka) Ny hosotra PX dia manome faritra fanasana lehibe kokoa, tonga lafatra amin'ny fiasan'ny mason-tsolika roa, io gropy io no mpanampy tena mahomby indrindra hanatanterahana ny fampandehanana be dia be!
Ny tombotsoan'ny lavaka tokana dia manintona ny nikelin-tsolara vita amin'ny voanjo
Malalaka sy malefaka ilay pokontany mitarika, ary afaka miverina amin'ny toerany tany am-boalohany araka ny tokony ho izy ary mora na aiza na aiza arak'izany. Afaka mihodina eo anelanelan'ny rano fandroana sy fivoahana rano amin'ny sitrapo, miainga any amin'ny fantsom-boasary. Tsotra ny miasa, manadihady amin'ny toerana rehetra tianao tamiadana.
SKU: 2311601 natsipaka nikela Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets ao an-dakozia Tags: Fitaovana savoka an-dakozia, Toro-tanana Pull, Inôksa
22 X 11.1 X 3 santimetatra
U *** f2020-01-28
Tena mifantina aho, manao fikarohana be dia be ary mirona hitady marika anarana fa tsy any ambanin'ny tsipika, noho izany dia nanao fikarohana tsara be aho talohan'ny nanampiako an'ity marika tsy fantatra ho ahy ity amin'ny lisitr'ireo marika malaza endrika mitovy amin'izany maherin'ny avo roa heny na intelo ny vidiny. Ity dia vokatra manana kalitao matanjaka, mahafinaritra ny endrika amam-bika sy ny fantsom-panafody, tsy nadio toy izany aho! Ny hany zavatra tsy haiko miresaka dia ny lava lava satria iray volana monja izy io, fa amin'ny ankamaroan'ny faucet an-dakozia, dia ampiasaina tsy tapaka izy io, ary tsy manana antony hieritreretana aho fa tsy hitovy amin'ny marika lafo kokoa. Safidy lehibe, mankanesa ao, vonjeo ny $, faly aho manolo-tena amin'ny kintana 5.
Tsy afaka mino ny lanjany sy ny kalitaon'ny vy vy. Ho an'ny vidiny, mianiana ianao fa misy zavatra tokony hahakivy, vy mora vidy, tsy dia misy kalitao… zavatra. Tsia, faucet avo lenta fotsiny izay mora vidy. Matotra, raha $ 100 fanampiny ity dia mbola nividy azy aho ary faly amin'ny fividianako. Tsara loatra amin'ny fifanarahana ity raha tsy handalo.
J *** f2020-02-05
nisalasala nividy marika tsy fantatra, saingy rehefa avy namaky hevitra dia nanapa-kevitra ny handeha aho. Ny fametrahana dia mora be raha oharina amin'ny hafa. Tsy mila plastika putty izay nahagaga tsara. Ny tsindry omen'ity faucets ity dia tsy nisy toa ahy tamin'ny marika fanta-daza. Tsy azoko atao izany. Nametraka ny alahady izahay, ka andro vitsivitsy monja (anio talata). Ny mivavaka haharitra ela kokoa noho ny 5 taona nataon'ny marika fantatro iray. Tehirizo ny volanao ary manafà ity faucet ity!
I *** f2020-02-09
Amin'ny maha-mponina ao an-trano izay mila manolo faucet ao an-dakozia taloha dia toa iray amin'ireo vokatra tsara loatra tokony ho izy ireo io. Saingy aorian'ny herintaona sy tapany ny fampiasana mafy, ary ny traikefa serivisy ho an'ny mpanjifa mahafinaritra, azoko lazaina tsara fa ity dia iray amin'ireo tolotra tsara indrindra hitako tao amin'ny WOWOW.
Mora ny fametrahana. Mora tokoa ka tsy nisalasala nanala sy nametraka azy io taorian'ny nifindrako tany amin'ny trano hafa. Araka ny nolazain'ny iray tamin'ireo mpandinika hafa dia azonao atao ny manova ny fantsona mafana sy mangatsiaka ka mangatsiaka ny fisintomana anao, ary mafana ny fanosehana, saingy tsy mendrika ny hoheverina ho lesoka akory izany.
Ny tena zava-dehibe dia, mijery sy miasa tsara izy io. Fantatro tamin'ity vidiny ity fa mety hampiseho karazana akanjo na tasy haingana izany, saingy diso aho. Mety ho diso hevitra mora foana izy ho an'ny faucet avo lenta izay mandeha amin'ny telo na efatra heny amin'ny vidiny. Ny lohan'ny fantsona sy ny fantsona dia mavesatra lanjaina mba hanitarana amin'ny ezaka kely sy hiarovana tsara rehefa esorina, ary ny tsindry hifindra eo anelanelan'ny renirano sy ny bokotra hampiatoana ny fikorianany dia apetraka tsara ary tsy hahomby mihitsy. Perfect.
Ity faucet ity dia sanda tena tsara, ny mety sy ny fiafarana no laharana voalohany. Ary koa, ny lalàna mifehy ny mari-pana sy ny tsindry rano dia ambony. Tena mora ny fametrahana azy, ny fitaovana tokana ilaina amin'ny fametrahana ahy dia ny wrench hanenjana ny tsipika famahanana amin'ny fijanonana zoro amin'ny rindrina eo ambanin'ny sink. Ny rafitra ampiasaina hanamafisana ny faucet mankany anaty labozia dia tena tsara tokoa na dia mivoaka aza, fametahana lehibe fotsiny azonao zahana manamafy ambanin'ilay fantsakana hamita ny fametrahana.
Aleoko io faucet io fa tsy ilay faucet American Standard nosoloiny. Mora kokoa ny nametraka, nanana fitsipika sy tsindry tsara kokoa, ary aleoko ny fisehon'ny faucet WOWOW. Ho bonus dia $ 93.44 ity faucet ity ary ny faucet American Standard nosoloiny dia $ 170 5 taona lasa izay!
Tsy afaka maneho hevitra momba ny faharetana aho, mazava ho azy, saingy misy fiantohana 5 taona, ary mifototra amin'ny fahatsapana ny faucet dia tsy isalasalako fa haharitra farafaharatsiny. Ny faucet teo aloha dia naharitra 5 taona mahery.
Izahay dia nampiasa ny faucet nandritra ny 6 herinandro izao, tena tsara tarehy sy miasa. Mora ny mametraka, tiako fa azo amboarina amin'ny toeranao ny toeran'ny mpikirakira. Toy izany koa ny takelaka hanaronana ireo lavaka hafa dia nampidirina tsy andoavam-bola fanampiny. Ny renirano mivaingana sy ny famafazana dia voalamina tsara ary aza manondraka rano manerana. Ny endri-javatra hisintona dia miasa tsara; Tiako ny tariby mavesatra fa tsy loharano ho an'ny miverina miverina. Mora ny manadio ny faucet, tsy mampiseho dian-tànana.
Ny faucet dia nalefa tsy nisy mpanasa lamba roa izay ampiasaina hanidiana ny faucet amin'ny toerany eo ambanin'ny kaontera. Nifandray tamin'i WOWOW tamin'ny alàlan'ny mailaka aho ary nahazo valiny haingana fa handefa vaovao izy ireo ary nomen'izy ireo ahy ny mombamomba ny fandefasana, izay avy any Shina. Heveriko ho serivisy tena tsara izany ary koa vokatra tena tsara.
Nandinika faucet maromaro aho teto ary hitako fa ity dia manana hevitra tsara kokoa noho ny faucet marika marika rehetra tsy an-kanavaka. Vonona ny handany $ 150- $ 200 ho an'ny faucet izahay fa ny hita dia io no safidy tsara kokoa. Nanana Moen izahay ary nanompo anay nandritra ny taona maro izy io, saingy ny fantsom-bolo tokan-tena tokana no te hanatsarana ny vadiko amin'ny fomba vaovao kokoa ka dia nofidinay ity iray ity. Tonga aloha kokoa noho ny nandrasana izy io, nofonosina tsara ary nasiana ampahany fanampiny.
Tsy mampino ity faucet ity. Orsa iray tamin'ny fametrahana azy io fa tsy hadisoan'ity vokatra ity. Jereo, lazain'izy ireo fa asa DIY izay azon'ny rehetra atao nefa tsy lazain'izy ireo koa fa mety nametraka fantsona teo aloha ny matihanina.
Naharitra 3 andro nisianana ny fianianana sy nandriatra ahy hanaisotra ilay fantsona taloha ary hahafahako mamoaka azy io sy miala amin'ilay rano. Ny tendrony tsara indrindra azoko lazaina dia alao antoka fa ampidiro ao ny laharam-pahamendrehana amin'ny sotasota. Izy io dia voatonona anarana ho zavatra "mahafinaritra hananana" fa ilaina izany. Raha ny amiko, tsy misy wrench na fitaovana kely ampy hidirana ao amin'ilay faritra ary afaka mihodina sy manao izany amin'ny hery ampy hanapahana ilay faucet izay mety efa teo hatramin'ny nananganana ny trano tany am-piandohan'ny taona 40.
Na izany aza, vantany vao afaka namoaka ny entana taloha aho, dia milamina ihany ny fametrahana azy. Ny torolàlana sy ny horonan-tsary dia mitarika anao amin'ny zava-drehetra ary ny hany hiccup nananako dia ny fiatrehana ny fantson-drano taloha izay nanana fifandraisana samihafa noho izay naseho ny torolalana. Tsara ihany ny niafarany, saingy te hikaroka aho ary alao antoka alohan'ny hiafarako amin'ny ranomasina misy rano amin'ny tany.
Ny faucet vaovao dia nanova ny lakozianako tokoa. Tsy vitan'ny hoe tsara tarehy io fa misy antsipirian'ny “bitika” vitsivitsy manatsara ny fiainako. Voalohany, nividy mpanome savony koa aho mba hiarahana amin'izany. Ka izany dia manala ny filan'ny dispenser tsy mendrika jerena mipetraka eo ambadiky ny fantsakana. Ary satria natsangana ao ambadiky ny faucet ny "tahony", dia esoriny daholo koa ireo bokotra kely ao ambadiky ny fantsakana. Manana efitrano foana aho izao, ka toa madio kokoa sy tsy mikorontana.
Ho fanampin'izany, satria lava be ity faucet ity, dia azoko atao mora foana ny manodina vilany be sy takelaka fanapahana ary takelaka cookie eo ambaniny mba ho diovina tsara. Miaraka amin'ny faucet taloha, dia namboarina tokony ho 6 santimetatra ny haavony, io no fahazoan-dàlana rehetra tokony hanananao manamboatra zavatra ao ambanin'ny rano izay hiafara amin'ny famonoana ny latabatra, izaho, na ny ao ambadiky ny fantsakana tsy azo ihodivirana.
Ankoatr'izay, satria azo esorina ny tahony, dia afaka mitondra ny rano amin'ny entana be aho fa tsy amin'ny fomba hafa izay manamora ny fanadiovana. Hitako fa afaka mifindra amin'ny nozotra aho ary mamoaka azy io amin'ny sakafo akaiky ary tonga avy hatrany izy io, ary avy hatrany dia mivoaka ny saosy raha avadika ho any amin'ny toerana mikoriana aho ary atsangako ambony be avy ao anaty vilany.
Azontsika atao ve ny milaza fa ny notifiriko teo aloha dia tsy nisy tsindry mihitsy ka tsy afaka nampiasaina. Ny fiasan'ny famafazana amin'izany dia nampahafantatra ahy ny famirapiratana afaka manaparitaka ny sasany amin'ny caked amin'ny sakafo fa tsy mila manosotra azy imbetsaka.
Mora kokoa ihany koa ny afaka "mikapoka" ny faucet amin'ny sandrinao mba handrehitra ny rano rehefa maloto ny tananao fa tsy mila mamily knob, manasa tanana ary avy eo manasa ny knob. Ka manatsara ny fandrahoan-tsakafo ao an-dakozako betsaka.
Nanana fanehoan-kevitra aho fa toa izy ary miasa toy ny maodely lafo vidy indrindra, izay fantatro fa nividy azy io tamin'ny vidiny mirary. Tiako ity faucet ity! Vokatra 5-kintana. Miasa tsara, tonga miaraka amin'izay ilaina rehetra hametrahana azy, ary efa nitazona efa ho 4 volana farafahakeliny ary havaoziko raha tsy izany. Ny hany zavatra tsy anarahany dia ny karazana kasety fanaovan-tsoroka. ny ankamaroan'izy ireo dia manome soso-kevitra hampiasa zavatra hiantohana ireo fifandraisana.
Naharitra 10 minitra fotsiny aho vao nametraka taorian'ny nanesorako ny faucet taloha. Mora tokoa ny nametraka azy, ary raha mbola madio ny faritra misintomana ny lanja sy ny fantsona dia miverina mora foana sy mafy ny loha. Ny zavatra iray tsy tiako, ny sary rehetra dia nampiseho ny tahony tamin'ny toerana mitsangana tanteraka. Nieritreritra aho fa ny rano mafana dia mijorika tsara, ary ny rano mangatsiaka dia mitsivalana tanteraka. Raha tokony ho izy, rehefa apetraka amin'ny tanany eo ankavanana, ny rano mangatsiaka dia 45 ° mankany amin'ny backsplash ary ny rano mafana dia 45 ° mankany amin'ny sink na ny mpampiasa. Rehefa heverina fa azonao atao ny manodina ny faucet ka eo afovoany ny tahony, dia misy dikany fa ny rano mangatsiaka dia eo ankavanana sy rano mafana eo ankavia, ary raha te-hametraka ny tahony amin'ny ilany ankavia ianao, dia tsy misy dikany ny fitodihan'ny tahony 90 ° mankany amin'ny backsplash (satria mety tsy ho tafiditra akory izy io). Ka natodiko ny tsipika rano mafana sy mangatsiaka ka 45 ° ny rano mangatsiaka mankany amin'ny sink / mpampiasa.
Mahafinaritra ny fijery, tsara ny haavony / fahazoan-dàlana ambonin'ilay fantsom-bokatra, miasa tsara ilay sprayer, ary sanda tsara izany.
A l ***2020-02-15
Tonga tamina boaty tsotra, boky tsotra izy io, saingy voaaro tsara ny entana rehetra.
Naharitra 10 minitra teo ho eo aho nanalana ilay taloha, manadio ary mametraka ity milina ity. Vakio fotsiny ny boky kely, ary bumm… vita. Araka ny hitanao amin'ny sariko dia toa kanto, mahazatra, milay izy. Somary lava sy lava habe. Tsy sarotra mihitsy ny mametraka azy.
Fitaovana roa ilainao: pliers sy basin na zavatra hafa hahamainina azy. Ie, lamba famaohana vitsivitsy fotsiny.
Tiako izy ireo fa tsy namatsy kojakoja vitsivitsy - raha ilainao izany satria ny faucet teo aloha dia misy fantsona lehibe kokoa na zavatra hafa. Hamarino tsara fa mametraka fantsona mety ianao. Nomarihin'izy ireo tamin'ny loko, maintso sy mena. Na ianao aza tsy mametraka an'ity zavatra ity mihitsy, toa ahy. Ampiasao fotsiny ny commonsense-nao fa mafana ny mena ary mangatsiaka ny maitso. Taorian'ny fametrahana ny zava-drehetra. Aza adino ny mametraka ny lanjany.
Somary maivana loatra amiko ny lanjany. Tandremo, tsy maintsy apetrakao amin'ny lafiny ankavanana ny lanjany. Raha tsy izany dia tsy handeha izany. Ity zavatra ity, mety tsy maintsy misintona ianao ary manosika ny faucet ary hitanao hoe iza no ambony sy ambany - apetraho eo ny lanjany.
Raha fintinina dia mora ny faucet, tsara kalitao, metaly - tsy plastika mora vidy. Milamina aorian'ny fametrahana. Tonga amin'ny famatsiana be dia be mety ilainao. Mora ny mametraka ary mamporisika anao hividy an'ity aho satria misy fiantohana 5 taona.
Nohavaozina aorian'ny herinandro vitsivitsy: tena tianay izany. Fahagaga, azonao atao ny manamboatra ny halavan'ny fantsona. Ie raha tsy tianao loatra dia apetaho ambony kely ny lanjany.
Toa tsara kokoa noho ilay taloha io. Ity dia mifanandrify amin'ny fanamboarako ankehitriny tsara kokoa. Tena mora ny mametraka. Nampidiriko ny video ho an'ny fametrahana fototra. Sambany nametraka faucet an-dakozia aho ary noho WOWOW. Nataon'izy ireo mora be ho an'ny vao manomboka. Ny lanjany dia tsara kokoa noho ny teo aloha. Mavesatra kokoa izany ary mihemotra hatrany ny fanitarana. Ilay taloha tsy nihemotra tamin'ny lalana rehetra. Milamina sy maharitra ny fikorianan'ny rano. Tsy haiko anefa ny momba ny plastika. Amin'izao fotoana izao dia tsy manana olana aho fa tsy afaka milaza izay hitranga amin'ny fotoana maharitra. Manantena aho fa hilamina. Raha mitady solony ianao dia zahao. Izy io koa dia misy ampahany fanampiny fanampiny tafiditra ao raha toa ka mila azy ireo ianao amin'ny manaraka.
*** D E2020-02-21
Faucet tsara kalitao ity. Mety tsara sy vita ary vita mafy. Azonao atao ny mandoa mora indroa ny vidiny ary mbola ity faucet WOWOW ity dia mety ho sandany lehibe. Mora ny fametrahana azy satria ireo faritra natolotra dia mitovy kalitao. Tsy misy subpar momba an'io.
Ny varavarankelin'ny lakozako dia mipetraka ambany ary mivelatra kely eo ambonin'ilay fitoeran-drano, izay mahatonga ny fantsona faran'izay tsara sy lehibe kokoa ho sarotra. Na izany aza, ny tapany ifotony miaraka amin'ny lever dia mifanentana tanteraka ao ambanin'ny fefy. Ny vatan'ny fotony mipetraka eo ambonin'ilay takelaka tarehy dia misy 1.8 metatra eo ho eo ary ny hatoka izay tafiditra ao anatin'ny foton'ny faucet dia sahabo ho 1 "ny savaivony (manodidina ny refy ny refiko, azafady mba jereo ny tena refy ao amin'ilay entana. famaritana).
Ny fiheverana iray hafa ho anao izay mety manana olana momba ny fahazoan-dàlana am-baravarankely koa dia ny fotony miaraka amin'ny lever azo ahodina mandritra ny fametrahana. Noho izany, raha tokony hipetraka amin'ny ilany ankavanan'ny faucet ny lever (izay raha tsy mandeha aho satria tsy hamafana ny varavarankely ny lever dia azonao ahodina 90 degre ny fotony! Tombony lehibe io amin'ny famolavolan'ny faucet. Araka ny hitanao eo amin'ny sary, ny haavony dia eo alohan'ny faucet, izay hitako miasa tsara.
Ka amin'ny ankapobeny dia omeko ity faucet 5 WOWOW ity ho an'ny kalitao sy ny endriny. Tsy nahafantatra ny marika WOWOW aho talohan'ny nanaovana io fividianana io. Ankehitriny rehefa nametraka iray aho dia mahatoky tena amin'ny fanolorana azy. Fantatro fa hividy ity marika ity indray aho.
E *** h2020-02-23
Faly be aho fa nividy ity faucet ity! Tsotra be ny nametrahana azy, namboarina tsara izy io ary mahatsiaro mateza.
Mbola tsy nametraka faucet lakozia vaovao mihitsy aho tamin'ny fiainako teo aloha ary tsoriko fa nametraka azy io nandritra ny fotoana kelikely nanantenako fa afaka minono olona hanao an'io ho ahy aho, hahaha. Nanapa-kevitra ihany aho tamin'ny farany ny hametraka ny patalohako vavy lehibe ary hanandrana izany ary zazalahy faly aho nanao izany, tsio-drivotra! Ny famoahana ny faucet-ko taloha izay niaraka tamin'ny trano novidiako dia tena sarotra, harafesina ary fanaintainana eo amin'ny hatoka fotsiny ny fiasana ilay wrench amin'ny toerana tery toy izany. Nila adiny iray mafy mba hamoahana ilay zavatra adala.
Ankehitriny dia tsotra be ny fametrahana ny faucet wowow Single Handle High Arch. Vitako tao anatin'ny folo minitra latsaka. Ireo torolàlana dia tonga amin'ny teboka ary mora harahina. Raha apetrakao mazava tsara ny fomba famakiana ny torolàlana, dia mandeha MAIMAIM-POANA ny faucet.
O *** ny2020-02-24
Tsy tiako mihitsy ilay faucet an-dakozia any an-trano. Izy io dia ambany, tsy manana safidy, ary indraindray mety ho maditra rehefa miatrika tsindry rano na maripana. Saingy nampatahotra ahy kely ny hevitra hoe mila manova iray aho hatramin'ny mbola tsy vitako. Saingy tamin'ny varotra vao haingana, nanapa-kevitra ny hanome azy io aho ary faly.
Tsy sarotra mihitsy ny fametrahana. Vonoy ireo soatoavina ao ambanin'ilay filentehana, makà seranana mba hamaha ny fehin-kibony, ary esory ny voalohany ary ampifandraiso ilay vaovao araka ny torolalana. Tsy mila fitaovana manokana, tsy misy kasety na lakaoly, na zavatra fanampiny.
Tiako ny arc ambony amin'ny tendany amin'ny faucet ary ny fahamoran'ny famadihana ny rano na ny fanodinana na ny hafanana sy ny hatsiaka miaraka amin'ny hetra fotsiny eo alohany (Namboariko ary natodiko manodidina ambony ny tarehy fa tsy ny lafiny). Ary afaka manala ny loha amin'ny faucet ary mampiasa azy io ho toy ny fantsom-panafanana, nofinofy izany. Misy bokotra iray akory aza any handehanana amin'ny maody roa samy hafa, tsifotra fohy kokoa na default, ary koa bokotra kely hampiatoana ny rano raha ilaina izany.
Ankafizo tsara ity vokatra ity ary tena faly miaraka aminy.
A l ***2020-02-25
Tsy mbola nampiasa ela. Hanavao raha ilaina. Vao napetraka androany i Faucet miaraka amina lakozia vaovao. Ny fitiavana jereny ary ny kalitao amin'ny ankapobeny toa tsara. Nilaza tamiko ny fantsako fa maro amin'ireo faucet sinoa ireo no mizara ampahany mitovy amin'ny marika marika ary tsara ihany ny kalitaony. Nolazainy koa fa ny ankamaroan'izy ireo dia hiafara hisolo toerana afaka 5 taona. Na ny marika marika aza. Saingy ho an'ny vidiny dia toa mahatalanjona izany ary toa miasa tokoa. Faly aho amin'ny vidiny ary hiteny aho hoe avelao izany!
*** O R2020-02-26
Ny orinasam-panofana nataoko dia nividy 6 tamin'izy ireo ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ao anaty singa 6 ary toa mirentirenty daholo izy ireo. Mora tokoa ny mametraka azy ireo ary ny mpifanaraka amiko dia tia azy ireo hatramin'ny fijerena ny kalitao.
Hatreto dia 1 ihany no tapaka taorian'ny fampiasan'ny fianakaviana 5 (6 ankizy) 4 volana. Nandefa mailaka ny serivisiny fiantohana araka ny nomena tao amin'ny tranonkala aho sales@wowowfaucet.com ary namaly izy ireo tao anatin'ny 6 ora ary nandefa vaovao ho solony. Nahazo ilay vaovao aho tao anatin'ny 4 andro. Eny, serivisy ho an'ny mpanjifa mahatalanjona izany. Misaotra anao!
Tsy mino aho fa nanao an'io! Tsy mbola nanao zavatra toy izany aho teo aloha. Mametraka faucet !! Noheveriko fa zavatra hanakarama olona hataonao ity! Na izany aza, nilaza tamiko ny solo'ny serivisy ho an'ny mpanjifa fa afaka mijery ilay horonantsary fotsiny aho dia manao izany ary… inona no fantatrao? MARINA IZANY !! Hiteny aho fa nanana fotoana sarotra kokoa tamin'ny famoahana ilay taloha. Hatramin'ny WOWOW dia nanisy teboka hanatsorana sy hametahana ny zava-drehetra. Saika tsy misy ati-doha amin'izay mandeha! Nataon'izy ireo mora kokoa aza ny fanamafisana ny lafiny amin'ny alàlan'ny peratra volo lehibe iray. Mino aho fa tsy nampiasa fitaovana hafa avy eo nampiasain'ny tanako banga. Ny hany zavatra ilaiko fanampiana dia ny olona mitazona mahitsy ny faucet rehefa manamafy ny visy aho. Na izany aza, mety ho vitanao irery izany. Mety haharitra ela kokoa fotsiny. Saingy heveriko fa azo tantanana izany.
Tao amin'ny trano fonenanay teo aloha dia napetraka ny faucet Delta, ka somary simba tanteraka izahay. Rehefa nifindra tao an-tranonay izahay dia nanana faucet fohy ny fantson-dakozia, ka rehefa afaka volana vitsivitsy nitolomana izany dia nanomboka nitady faucet avo lenta aho. Nijery marika farany ambony aho, saingy tsy vonona ny hamoaka $ 200 + ho an'ny faucet izay mety hosoloina rehefa manamboatra isika. Nahita fantsona wowow aho ary nahaliana ahy ny isan'ny fanamarihana tsara. Tantara lava fohy - nividy faucet. Tonga tao anaty boaty iray tena milamina sy matihanina miaraka amina entana voapaika ho Styrofoam mainty izy io. Ny fametrahana ny faucet WOWOW dia naharitra 10 minitra, anisan'izany ny fanesorana ilay faucet taloha. Ity singa ity dia toa malama, avo lenta ary miasa tsara. Nanana izany nandritra ny 3 herinandro - tsy misy fitarainana. Fanerena rano tsara, fantsom-pifandraisana tsara sy mahavariana… ny tena zava-dehibe TSY MISY VOAFITRA. Ka tena manome sosokevitra aho (antenaina fa hijoro amin'ny fotoana izy).
Tao an-tranonay nandritra ny 35 taona mahery izahay, ka ity no farafahakeliny ho an'ny fantsona lakozia lakozia nosoloinay. Nizotra tamim-pilaminana ny fametrahana ary tiako ny zava-misy fa tonga efa niraikitra ny tsipika fampitana ka tsy nila nampiasa ny làlan'ny famatsian-ko efa nisy aho, miampy ny vidiny ambany noho ny faucet 2 farany napetrakay. Nosoloinay faucet an-dakozia mariky ny anaran'ny lakozia izay nankahalainay hatramin'ny andro voalohany satria tsy nisy ny tsindry ary tsy nisy ny habeny, nivoaka avy tao anaty faucet ny rano tao anaty rano malemy; Ny olana dia nitifitra ny, ny efijery, ny diffuser, ny valves ary ny famatsian-tsipika, ny rano malemy dia vokatry ny faucet roa taona. Tsindry sy rano be dia be miaraka amin'ny faucet WOWOW ary tianay ny zava-misy fa ny asa rehetra dia tanterahina avy amin'ny toerana iray.
Ity faucet ity dia tsara amin'ny vidiny ary miasa io. Izy io dia faucet tena mafy orina, mateza ary mahomby. Tena tadiaviko faucet izay misy sprayer ao anatiny ary faly aho fa manana sprayer azo esorina ary tena mandeha tsara. Misy lanjany miaraka amin'ity faucet ity hametrahana azy eo ambany, ka ny miverina dia miverina miverina amin'ny toerany araka ny tokony ho izy. Ny zavatra tsara iray hafa dia ny tsy mampiseho fanontana amin'ny rantsan-tànana ka toa madio be. Mora ihany ny mametraka ity faucet ity ary na olona mahay aza dia afaka mametraka azy ao anatin'ny adiny iray na mahery. Faly amin'ny fividianako aho ary manome toky ny hafa koa.
WOW!! Vokatra tsy mampino ho an'ny vola, nametraka azy tao anatin'ny 20 minitra. Nahita ny tsikera 5 kintana rehetra saingy mbola nisalasala ihany ny amin'ny fividianana. Nanapa-kevitra raha tsy tiako izany dia averiko. Nanafatra izany ary tsy mino ny kalitao. Raha mitady faucet an-dakozia vaovao ianao fa tsy mitady handany 300 na mihoatra dia IZAO NO FAUCETO VIDINAO VONONY !!!! Tsy ho faly amin'ny fividianana ity! Ny faucet nosoloiko, nandoa 330.00 aho 8 taona lasa, ity dia tsara toa azy daholo !! Tsy ho diso fanantenana ianao amin'ity iray ity !!!
Sarobidy mahatalanjona ity. Ity faucet ity dia nanolo ny iray izay vidiny efatra heny tamin'ny voalohany ary kalitao tsara lavitra noho izany. Tsy afaka manomboka milaza aminao aho fa manaitra izany. Tena vita tsara!
Volana maromaro taty aoriana; raha ny hita, injeniera OK aho.
Natahotra aho sao ho tafaporitsaka eo an-tampon'ny kofehy. Tsy izany. Mafy ity vokatra ity
~ roa volana aty aoriana, mbola vokatra mahavariana ity. Injeniera aho, niahiahy ny amin'ny pivot point ho an'ny loha aho. Tsy tafaporitsaka mihitsy. Mbola mamporisika mafy an'ity singa ity ihany aho
H *** f2020-03-12
Herinandro teo ho eo izay no nametrahako ity faucet dakozia WOWOW ity ary hatreto dia talanjona tamin'ny kalitao aho. Rivotra ny fametrahana azy (15 minitra fotsiny no nataoko) ary izay rehetra ilaina (afa-tsy ny pliers) dia tonga niaraka tamin'ny fonosana. Raha misy ny lafy ratsy, ny soavaly dia miraikitra amin'ny faran'ny faucet ka raha manomboka mivoaka ny iray amin'izy ireo noho ny antony sasany dia tsy maintsy miafara amin'ny fanoloana ny faucet iray manontolo aho. Izany dia nilaza fa tsy hitako ny fivoahan'ny rano, tsara ny tsindry rano, ary koa ny fanaraha-maso ny mari-pana. Raha ny lavitra dia mora lavitra izany raha oharina amin'ireo faucet mora vidy indrindra hitako any amin'ireo magazay fivarotana fitaovana eto an-toerana. Tsy mpantsaka matihanina aho fa ho ahy, ity vokatra ity dia mitovy sy mahatsapa ho toy ilay lafo $ 200 nosoloiny. Raha manome ahy 4-5 taona tsara (izay ny nomeko farany) dia heveriko fa faly. Sanda tsara amin'ny vola.
*** S S2020-03-15
Nametraka ity faucet ao an-dakozia ity aho teo amin'ny 30 minitra, ny ankamaroany dia nandany ny fantsom-pifandraisan'ny rano. Ny olana tokana nananako dia ny faucet taloha izay tsy nipoitra intsony taorian'ny nanesorana ilay pataloha henjana. Saingy, tsy dia olana lehibe tamiko izany, izay nahafa-po tokoa ny nampiasa.
Nahazo boaty roa ny vokatra ary natolotra tamin'ny toe-javatra tsy misy kilema. Ny faritra rehetra dia tao ary ny karatra fampianarana dia mazava be na dia tsy dia nampiasaiko loatra aza (zavatra lehilahy io). Tena tsara ny riandrano ary tsy misy fivoahana mihitsy. Nahavariana ahy ihany koa ny nanamarika teo amin'ny tsipika rano lehibe amin'ny lanjany izay manampy amin'ny famerenana ny fanitarana faucet. Ny zavatra kely toa izao dia manafaingana ny fametrahana ary misoroka ny olana amin'ny ho avy. Tiako be koa ilay voanjo manamafy plastika izay mifanentana amin'ny tanana iray manontolo ary tena mora mipetrapetraka tsy mila fitaovana ilaina.
Nanafatra ity faucet ity aho hanoloana faucet Peerless izay novidiko tany Walmart roa taona lasa izay .Ny fantsom-peerless dia nahatsiravina tafaporitsaka rehefa afaka roa volana ary rehefa avy nanolo ny ampahany tamin'ny fiantohana dia mbola nanana olana izy io. Nametraka ilay faucet vaovao aho ary tena Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php/ Ny miasa eo ambanin'ny lakozia ao an-dakozia dia tsy asa mahafinaritra tsy misy toerana hiasana firy fa vita izany ary tena faly aho amin'ny vokatra. Manoro hevitra an'ity vokatra ity aho.
Ity angamba no mpamadika lalao lehibe indrindra tamin'ny fanamboarako nilentika tao amin'ity trano novidiko 3 taona lasa izay. Ny fantsona taloha dia hivoaka sy hanondraka rano avy any ambony rehefa hamono azy aho.
Nanapa-kevitra ny haka ity faucet ity aho, ary faly be fa nanao izany. Naharitra 20 minitra teo ho eo vao nametraka ary tsotra be. Fampiasana fitaovana fototra, ary hahazoana antoka fa nety ny zava-drehetra.
Ny lanjany ampiana amin'ny fantsona dia tsara satria mivoaka ny fantsom-panafody ary mamela anao hipaoka na inona na inona. Tiako fa malefaka be izy io.
Ny farany dia tena tsara, toetra matanjaka.
Faly be aho fa nanapa-kevitra hanova azy.
Nanapa-kevitra ny haka an'io faucet io ho an'ny zanako vavy ao amin'ny efitranony (amin'ny tranonay) aho satria ny faucet taloha dia maodely fahazoan-dàlana ambany ary nijanona tsy niasa intsony ny rano mafana. Tsy te handany vola be toy ny tamin'ny fantsom-baravarankely manokana aho, fa kosa mila zavatra mety hiasa tsara ary hahafaly azy. Rehefa avy namaky ny hevitra momba ity faucet ity aho dia nanapa-kevitra ny handray fotoana miaraka aminy na dia mbola tsy naheno an'ity orinasa ity aza aho, wowow. Faly be aho fa nanao izany!
Ny vidin'ity faucet ity, araka ny hitanao, dia tsara lavitra noho ny fifaninanana apetraky ny marika lehibe kokoa. Ny faucet dia tsotra ho ahy nametraka, na dia vao sambany nametraka faucet aza aho. (Matetika avelako any amin'ny vadiko io asa io.) Ny ampahany sarotra indrindra dia ny fampandehanana ny vatako be lanja tao ambanin'ilay fantsakana ary nanala ireo fantsona taloha. wowow efa nofonosana ity faucet ity ary namboarina daholo ny zava-drehetra mba hahafahana mametaka azy mora foana sy miaraka amin'ny takiana fitaovana voafetra.
Faly be ny zanako vavy tamin'ny faucet vaovao ary naneho hevitra imbetsaka momba ny maha-“mahafinaritra” azy ny manasa lovia ankehitriny. Miasa mahagaga ny faucet ary tena manintona ny maso. Miasa tsara ny zava-drehetra tsy misy fivoahana na olana aorian'ny fametrahana azy. Misaotra anao, wowow, nahatonga an'ity vehivavy ity hahatsapa ho tsara amin'ny tenany!
*** S S2020-03-29
Ny nahavariana ahy voalohany dia ny fomba nanangonana ireo sombin-javatra tao anaty boaty. Ny sombin-javatra tsirairay dia narovan'ny plastika mainty. Ny takelaka vita amin'ny takelaka (ampiasaina amin'ny filentehana lavaka telo) dia tonga tamin'ny fitoerany lamba mainty manokana. Mora ny nametraka ho an'ny vadiko. Nametraka faucet izy taloha, fa ny lanjany mainty ampiasaina amin'ny famafazana spray spray dia somary tsy nitovy taminy. Nataoko nijery azy ireo ny horonan-tsary alohan'ny nanombohany nanome azy hevitra momba izay tokony hatao. Araka ny aseho amin'ny horonantsary dia tsy nanenjana tery ny kitapo izy. Tsapany fa nohamafisiny tsara izany. Ny ahiako iray dia ny nihetsiketsika kely ilay faucet rehefa nokasihina nefa tsy nisy tokony hatahorana loatra. Ny vadiko, izay mazàna mety mahita lesoka amin'ny zavatra novidiako, dia tsy mitaraina amin'ny faucet. Nomeny tsiny ny fihetsiketsehana noho ny haben'ny vongan-tsakafonay fa tsy amin'ny faucet ary namboariny ny olana tamin'ny fametrahana tabilao kely iray tao ambanin'ilay fitoeran-drano mba hanohanana fanampiny. Tsy mihetsika mihitsy izao. Nampiasa matetika ny sprayer aho taoriana kelin'ny nametrahana azy ary nomeko fanadiovana tsara ny fantson-by vy. Mahafinaritra ny manana ny sprayer satria tsy maintsy nilatsaka ny sprayer sisin-tsika tamin'ity fahavaratra ity rehefa nanana rafitry ny rano fisotro napetraka. Azonao atao ny mahita azy eo amin'ny ilany ankavanan'ny sary farany. Rehefa nanjary safidin'ny faucet rano fisotro ao anaty lavaka hisolo ny sprayer, na ny fametrahana ilay faucet rano fisotro napetraka any an-toeran-kafa dia nisafidy ny soloiko ny sprayer. Na dia tsy nampiasainay matetika aza ilay sprayer dia nisy fotoana tsy nahitako azy. Ny faucet ao an-dakozia dia mifanitsy amin'ny faucet rano fisotro, ary tiako izy roa. Izahay tamin'ny voalohany dia tsy afaka nahazo ny bokotra teo amin'ny lohan'ny sprayer izay heverina fa hiato kely fotsiny ilay spray, nefa mandeha io izao. Amin'ny ankapobeny, tiako hatreto ny zava-drehetra momba ny faucet ao an-dakozia WOWOW - ny endriny, ny fiantohana mandritra ny dimy taona, ny fombany mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika, ary indrindra amin'ny vidiny rehetra.
Tiako ity faucet ity. Antsasaky ny vidin'ny marika marika indrindra ho hitanao any amin'ny magazay ary vita tsara ihany. Tsotra ihany koa ny fametrahana! Zavatra 2 ihany no sarotra tamin'ity faucet ity. Ny voalohany dia nandresy lahatra ny vady haka azy nefa tsy nahita azy manokana ary ny faharoa namoaka ilay faucet taloha. Malahelo ilay olona namolavola ireo visy plastika taloha. Soso-kevitra Pro, raha manana ireo ianao ary tsy afaka manala azy ireo, dia mitahiry fotoana sy ezaka tsy ahazoana toerana ary avy hatrany dia mitrandraka sy mitrandraka be indrindra. Raha mamaky an'ity ianao dia nitovy tamiko. Te ho azo antoka ianao fa mahazo faucet tsara, fa matokia ahy sy ny hevitra tsara rehetra. Faucet tsara ity ary fifanarahana mahafinaritra!
M *** f2020-04-05
Tiako ny vita na dia maivana kokoa noho ny niheverako azy aza. Manana marika malaza be aho izay nitovy nefa mavesatra. Hatreto dia mandeha araka ny nandrasana izany. Mahagaga fa ny lanja hampihemorana ny fantsom-pifandraisana dia mavesatra loatra ka mamerina azy io tsy misy fanampiana; ary tsara izany. Satria tanana tànana ankavanana aho dia natakaloko ny tsipika rano mafana sy mangatsiaka mba hitrotro ho an'ny rano mangatsiaka ilay tahony ary hatosika hiverina ho mafana aho satria ny rano mangatsiaka dia hampiasaina matetika kokoa (hoy ny mpantsaka matihanina iray fa diso ny fametrahana azy azoko natao koa ny nanova ny lalan-drano alohan'ny hametrahana azy). Namaky fanamarihana momba ny mpanjifa hafa manana olana aho fa hiandry hijery.
Na dia natao ho an'ny fametrahana mora aza izany dia ny fatiantoka ratsy iray dia ny fametahana ny lanja azo averina. Ny olona iray dia tokony hitandrina tsara rehefa manokatra hametaka azy amin'ny hosotra. Tsy mora ny manokatra toa izao; ka raha tsy vita tsara ary simba dia tsy afaka mikatona intsony raha tsy mampiasa clamp hose.
*** L Y2020-04-08
Faucet tsara io! Tsara ny famaranana, fa ny tena zava-dehibe dia ny fomba fiasa tena izy. Nandritra ny volana vitsivitsy no nampiasako azy, ary ny lohany dia mbola tsindrio mora foana hiverina any amin'ilay mpihazona aorinao nidina. Ny zoro an'ny faucet dia tsara sy avo, izay manamora ny fanadiovana vilany sy lapoaly lehibe fanampiny. Ny fikorianan'ny rano koa dia mora mifehy, Tianay izany! Tena soso-kevitra!
T *** ny2020-04-11
Ny eritreritro voalohany dia hoe, mety tsara amin'ny tranokala fa tsy mety kalitao avo io. Diso aho, nanaitra ahy avy hatrany ny lanja sy ny fahatsapana. Fanorenana mafy dia mafy tokoa. Izy io aza dia miaraka amin'ny adaptatera sy efijery rano fanampiny. Sarany betsaka…
Rivotra ny fametrahana. Nanaraka ny sary tsikelikely ary nahavita azy tao anatin'ny 15 minitra, ao anatin'izany ny fanesorana faucet taloha. Ny voanjo lehibe hanenjanana ilay singa ho an'ny dounter dia tsara. Afaka mahazo tena fihazonana tsara ianao ary manamafy amin'ny moramora.
Ny tahan'ny fikorianana dia tsara, tiako ny endri-tsifotra satria tery kokoa noho ny ankamaroany izany ka tsy misy fihoaram-pefy .. Ny endrika dia kanto, hihevitra ny olona fa nandany $ 100 mihoatra ny nataonao ianao.
Ity zavatra ity dia fanampin-tsakafo mahafinaritra an'ny SS vaovao milentika ao amin'ny efitranoko. Nanao fizahana mialoha aho, araka ny nolazain'ny sasany, ary tsy nahita olan'ny QC alohan'ny hametrahana. Nataoko tamina fantsom-baovao ity, ka nataoko rehefa tsy nisy ilay filentehana, izay azoko antoka fa nanampy ahy. Ny rafitra fanamafisana dia niasa tsara, saingy mila azonao antoka fa afaka mahatratra azy ianao. Mety ho olana bebe kokoa izany raha tsy afaka mamindra ny milentika ianao. Ny faucet dia miasa tsara aorian'ny fametrahana azy; manana fahatsapana mahafinaritra izy io ary tsy mitete mihitsy. Faly be aho amin'ity unit ity ity fa hividy hafa hanoloana ny faucet ao an-dakozia aho!
Efa napetraka tao an-dakozianay ity faucet ity nandritra ny herinandro teo. Taorian'ny fananana rafitra fanalefahana rano an-trano iray manontolo izay napetraka tao anaty fantson-drano alkaly dia tsapako fa nila sprayer aho, izay nesorin'ny spout alkaly. Nanafatra an'io izahay satria ny vidiny dia tsara lavitra noho ny mpifaninana ary toa izany no hanatanterahana ny antony tadiavinay. Tsy nampoiziko ny fantsom-panafody tsara kalitao toy izany ho an'ny vidiko aloako. Namaky famerenana be dia be aho nitaraina fa ny faucet dia tsy manintona na tsy tsindrio eo amin'ny toerany. Marina izany fa rafitra mavesatra mitondra ny sprayer hiverina any amin'ny toerany aorian'ny fampiasana azy. Hatreto tiako io ary tsy misy fitarainana. Mametaka tsara rehefa tsy ampiasaina ary toa manintona ao an-dakozia ihany koa. Tena manoro hevitra an'izay maniry faucet tsara aho nefa tsy manapotika ny banky hanao izany.
Tena tsara ity faucet ity. Faucet mahafinaritra ho an'ny vidiny izy io, ary toa tsara toy ny faucet dôlara ambonimbony kokoa any ihany. Tsy ratsy velively ny fametrahana, fa ny hany olako dia ny tsy fananako toerana kely eo ambanin'ny filentehako hiara-miasa. Naharitra kokoa noho ny notadiaviko izany, fa raha manana toerana ampy eo ambanin'ny filentehako aho, dia tokony ho rivotra !! Faucet tena tsara izy io, ary tsara ilay mpanao sprayer namboarina !! Tsikaritro ihany koa fa ny tsindry rano dia tsara lavitra noho ny faucet teo aloha izay tsy nampoizina. Raha mieritreritra ny hividy an'io ianao, saingy tsy azonao antoka izany, manoro hevitra aho ny handeha ho any. Nisalasala aho tamin'ny voalohany satria fotsiny hoe somary be lavitra noho izay tiako aloa izany, fa nampitahako tamin'ny hafa, ary tsy afaka mandoa $ 100 + ho an'ny modely mitovy amin'ny marika hafa aho. 90 $ ho an'ity dia tena mendrika izany raha ny hevitro. Mahafinaritra ity faucet ity !!
Ity no faucet mahavariana indrindra novidiko sy napetrako. Mahagaga ny injeniera ao ambadiky ny fizotry ny fametrahana. Vantany vao nesoriko ny faucet-ko taloha (izay sarotra) dia 10 minitra no nametrahako ity faucet lakozia WOWOW ity. Ary mahatalanjona ihany koa ny ahafahanao mametraka ny fikirakirana miasa amin'izay tianao, eo ankavia, eo ankavanana na eo afovoany amin'ny fotoana rehetra aorian'ny fametrahana azy. Andramo amin'ny faucet hafa izany. Tsy afaka faly kokoa aho. Sarobidy sy fomba fampiasa amin'ny baoty.
Raha ny marina dia tsy mbola naheno momba ny wowow aho talohan'ny nividianako ity faucet ity. Nahita an'ity zavatra ity miorina amin'ny fanadihadihana aho ary nanapa-kevitra azy io ho fanomezana fialantsasatra ho an'ny lakozian'ny mpianakavy iray - hitako fa mendrika ny $ 80 aloa.
Tonga lafatra ve izany - Tsia - nanatsara avy hatrany ny kalitao sy ny fampiasa mihoatra izay nananany tao an-dakozian'izy ireo - Eny. Hividy indray ve aho sa hanome soso-kevitra - Eny.
Ny entana dia nanao doka tamin'ny "install aorian'ny 30 minitra", izay ekeko fa marina. Ela kokoa ny fotoana nanesorako ny faucet taloha, saingy niaraka niasa ny asa tao anatin'ny adiny iray latsaka.
Manana fisalasalana kely aho amin'ireo singa plastika, ao anatin'izany ny lanjan'ny hosotra sy ny fipetrahany, fa ny rehetra kosa niaraka mora foana ary niasa hatreto.
Vao iray herinandro no nampiasako azy - hanohy hanara-maso ireo famoahana voalaza aho - fa amin'ny fampiasana mavesatra be hatramin'izao - tsy misy zavatra hita.
Ny zavatra tsara indrindra tamin'ity dia ny vidiny ambany sy mora ny fametrahana azy - ary niaraka tamin'ny mpikambana tao amin'ny fianakaviako nanampy tamin'ny fametrahana azy ireo (nanemotra volana maromaro izy ireo tamin'ny fividianana faucet vaovao) - matoky tena kokoa izy ireo fa raha misy zavatra tsy mandeha tsara - takatr'izy ireo ny fomba niarahan'izy ireo ary ho fantatr'izy ireo izay hotadiavina amin'ny ho avy
Nividy ity faucet ity ho an'ny tranonay taloha efa-taona lasa izay, ary izany no zavatra mety indrindra ho anay. Niasa tsara, nijery tsara, ary nahitsy nametraka. Rehefa nifindra tamin'ity fahavaratra ity aho dia nanandrana nitia ny faucet ao an-dakozia tao amin'ilay tranonay vaovao, fa na dia anarana marika mahazatra kokoa aza io dia tsy nampitaha izany. Faly be aho nahita fa mbola misy io faucet mitovy io, ary napetraka raha vantany vao tonga. Fahafinaretana ny fampiasana azy, ary tena amporisihiko ianao.
E *** ny2020-05-13
Vao nividy an'ity faucet ity aho dia mandinika ny kalitaon'ny vokatra ao anaty boaty sy ny fizotry ny fametrahana. Efa taona maromaro izay no nametrahako faucet an-dakozia. Ny fotoana farany nametrahako azy dia nisy vozon'akanjo voahidy teo ambanin'ny faucet niaraka tamin'ny visy 2 tao amin'ny vozon'akanjoko izay nohamafisinao tamin'ny alàlan'ny biriky mba hanamafisana ny fantsona amin'ny toerany. Ity faucet ity dia manana vozon'akanana izay manenjana ny faucet ary hitako fa mora kokoa noho ny fomba fitily io. Napetrako lockerite kofehy locktite manga mba hahazoana antoka fa tsy nivaha satria nanana aho. Heveriko fa tsy ilaina izany fa nivaha ilay faucet taloha ary izay no nanoloana azy.
Avy ao anaty boaty ny vokatra dia tena matanjaka izy ary toa namboarina tsara. Taorian'ny fametrahana sy fanandramana dia nahatsapa fa tafaraka tsara ary natanjaka ny riaka. Rehefa vonoina dia azo antoka ary tsy nisy mitete tonga avy ao. Ny zavatra hafa tiako dia ny fifandraisana mafana sy mangatsiaka avy ao anaty boaty dia ampy hatreo amin'ny vodin-drano. Taloha aho dia tsy maintsy nampiasa indray ny fantsom-pifandraisana mba hifandraisanao amin'ireo fifandraisana fohy eo ambanin'ny filentehana. Naharitra 30 minitra ny totalin'ny fametrahana azy, tsy tafiditra ao ny famoahana ny faucet taloha. Izy io dia manana antoka maharitra 5 taona ary latsaky ny $ 100 raha maharitra 5 taona ity ary mila soloina dia mety hividy marika hafa mitovy amin'izany aho.
M *** f2020-05-15
Nividy ny faucet-ko aho herintaona lasa izay ary eny nanomboka nitete kely avy amin'ny tahony (cartridge) izy rehefa avy tany amin'ny masoandro nandritra ny herintaona (Ampiasaiko eo amin'ny fitoerako BBQ any ivelany). Nifandray tamin'i WOWOW tsotra fotsiny aho ary noteren'izy ireo cartridge vaovao aho (5 andro monja no nahatongavako avy tany Chine!). Tsy vitan'ny hoe nandefa cartridge ho ahy izy ireo, fa nandefa fitaovana hanalana ilay cartridge, peratra retainer vaovao, visy set Allen, wrench Allen ary bokotra miloko mafana / mangatsiaka (mena / manga) vaovao handrakofana ny lavaka izay misy anao miditra amin'ny visy Allen amin'ny tanany. Izaho dia mpifaninana plumbing manana fahazoan-dàlana ka tsy ampy 5 minitra akory vao afaka nifanakalo ilay cartridge. MORA MORA! Mametraka faucet avo lenta foana aho, ary misy koa manana olana. Ho an'ny teboka vidiny dia tsara ity faucet ity. Eny, nanana olana aho, saingy nanamafy izy ireo ary nanamboatra azy io! Tena hividy an'ity faucet ity indray aho!
Natolotra indray hariva. Nentina nivoaka ilay faucet taloha ary nosoloiny an'ity raha mbola nahandro sakafo hariva ny vadiko. Tsotra izany. Tsy plumber fotsiny aho fa lehilahy mahazatra. Raha tsy mora ampiasaina ao an-trano ianao, dia haharitra ela kokoa ianao, fa raha manana saina mahazatra ianao dia mitsambikina miditra ao. Ity zavatra ity dia nasiana boaty tahaka ny vidiny an-tapitrisany dolara. Tsara ny famaranana ary mahavariana izany. Nisy nilaza fa nisy nitete na namoaka azy ireo, izay niraikitra amin'ny fantsona ny fantson'ny orinasa. Mihamafy aho7 avy eo miakatra kely fotsiny. "Aza" manenjana azy ireo sao manana olana ianao. Azonao atao ny mamadika ny tadiny mankany amin'izay lalana tianao, ankavia, eo afovoany na havanana. Tianay izany. Hividy iray hafa aho. Maninona no mandoa $ 300.00 amin'izany. Tazomy ny antontan-taratasinao sy ny ampahany fanampiny. Namaky tatitra maromaro momba ny serivisy serivisy lehibe aho. Maka fahafinaretana. Ankafizo.
Ny antony tokana nomeko naoty kintana 4 dia satria nametraka azy fotsiny aho. Azoko atao ny manatsara na midina rehefa mampiasa azy aho. Sahala amin'ny maro dia somary miahiahy foana aho mahita ny vidiny toy izao - mahazo izay aloanao ianao, marina? Mila milaza izany aho hatreto. Nametraka an'io haingana ny vehivavy tokana. Mazava ny torolalana. Izaho dia mampiasa kasety plumber amin'ny kofehy foana. Faucet tsara tarehy be ity ary tena manao an'izay ilaiko hatao ary tiako izany. Ary… .. vaovao io ka ho hitantsika ny fahombiazany rehefa mandeha ny fotoana. Ataovy azo antoka ny fisoratana anarana ny antoka 5 taona ao amin'ny tranonkalany. Tsy mila mividy fiantohana vokatra fanampiny ianao .. .. tahaka ny nataoko. Na izany aza tsy nahalala ny fampahalalana momba ny fiantohana aho rehefa nividy azy. Fanoloana feno ao anatin'ny 5 taona ho an'ny vokatra tsy mety. Heveriko fa tsy nahavita nanolotra an'ity aho ka izao dia hiteny aho fa tena faly tamin'ny fividianako. Amin'ny fotoana tsy fahita firy dia milatsaka ny lanjany saingy mety ho fanamboarana mora amin'ny kasety fantsona kely izany. Tiako izy izany.
J l ***2020-06-02
Voalohany ny vokatra dia toa faucet lafo vidy kokoa avy ao anaty boaty. Sarobidy lehibe noho ny halehiben'ny endrik'ilay faucet. Miasa tsy misy kilema koa. Ary koa toa mahafinaritra amin'ny fantsom-bitsika vaovao - mifanentana tanteraka izy ireo. Raha nanana plumber nametraka faucet sy sink aho dia nanana olana kely iray izahay. Ny fantsom-panafody izay niaraka tamin'ny faucet anay dia lava loatra ka nanjary tratra tamin'ny sasany amin'ireo fittings niraikitra tamin'ilay fantsakana etsy ambany. Ity dia olana olan'ny famolavolana teo ambanin'ny falehanay fa tsy olana faucet. Nifandray tamin'ity mpivarotra ity aho ary nampahafantatra ahy izy ireo fa fanaon'izy ireo ny manao fantsom-panafody fohy kokoa hanamaivanana ny olantsika. Tadidio fa olana nateraky ny fantson-drano ambanin'ny nilentika io fa tsy vokatry ny vokatra diso. Vao haingana ity orinasa ity no nandefa ahy ny fantsom-panafody izay nolazain'izy ireo fa hanampy amin'ny fanalefahana ny olako. Nety tsara izany. Ity orinasa ity sy ny ekipan'ny serivisy ho an'ny mpanjifany dia nihoatra lavitra noho izay fanampiana azoko tamin'ny lasa tamin'ny entana novidina an-tserasera. Fiantsoana manokana ho an'i Nick sy ny ekipany noho ny fandehanana etsy sy eroa mba hanampy amin'ny olantsika. Azo antoka fa hanafatra anao aho rehefa manomboka ny fanavaozana ny trano fidiovana. Misaotra anao tamin'izay rehetra nataonao ho an'ity mpanjifa tena afa-po ity.
Faucet dia nofonosina tsara ary napetraka teo amin'ny lamosina foam mba hiarovana amin'ny fandefasana. Nosoratana tamin'ny kitapo kely hidy zip ny ampahany. Nanisy ampahany fanampiny koa izy ireo.
Tena mora ny nametraka. Ny torolàlana dia amin'ny teny anglisy miaraka amin'ny torolàlana mazava tsara. Naharitra 1.5 ora ny fanesorana ny taloha sy ny fametrahana ilay vaovao. Noraisinay ny torohevitry ny mpandinika iray izay nanolo-kevitra ny famadihana ireo tsipika mafana sy mangatsiaka ka ho fanosehana hiverina ary hatsiaka hanosika handroso. Mety kokoa tamin'ny fianakavianay io fanaingoana io. Ny zavatra iray no novainay dia ny fanampiana ny lanja taloha ary koa ny vaovao. Ny vaovao niasa tsara nefa ny lanjany fanampiny dia tsara kokoa.
Tsara ny vidiny ary tsy mora ny mijery amin'ny lafiny rehetra.
Hanoro hevitra azy aho ary hividy azy indray.
Roa volana lasa izay taorian'ny nametrahantsika ny faucet ary mahaliana ny fahombiazany.
Nanampy namana iray nametraka an'ity faucet ity tao an-tranony aho ary nahafaly ahy tokoa ny vokany, ka nanapa-kevitra ny hametraka iray ao an-dakozako maotera aho. Ny mpanamboatra dia misy adaptatera roa hiova amin'ny tsipika rano samihafa. Nankasitrahako izany fikasihan-tsaina izany. Ary koa, ny voanjo ampiasaina mba hametahana ny faucet ao anaty rano dia manana «grip» lava manodidina ny 3 ″, ka ny fanamafisana farany dia azo tanterahina mora foana amin'ny tanana, fa tsy mila ilay valizy. Ny ampahany sarotra dia ny famoahana ny faucet taloha. Raha vantany vao vita izany, tsio-drivotra somary somary malefaka ny fametrahana ity iray ity.
Tiako ity faucet an-dakozia ity ary efa nampiasaiko volana vitsivitsy izao, saingy mety tsy hitovy ny fampiasanao azy noho ny zavatra efa nahazatra anao tamin'ny faucet farany anao.
Nanao fanitsiana ara-batana sy ara-tsaina vitsivitsy aho ary manana traikefa tsara lavitra noho ny fampiasana ny wowow. Avelao aho hizara azy ireo aminao.
1. Notehiriziko tamin'ny fantsako farany ny lanja kely kokoa ary nampiasako azy io… ilay iray tafiditra tao dia nidoboka be tao anaty valin'ny rano tao ambanin'ilay fantsakana.
2. Natodiko ho eo aloha ny tahony, tsy azoko ny tsiranoka amin'ny sisiny, miampy tsy azo ihodivirana fa lena ny tananao ary mitete eo amin'ny sisiny, fa rehefa eo aloha dia tsy misy korontana. Ary fohy ny tahony ka tsy misy olana mipoitra na manakana vilany na vilany.
3. Raha miresaka fehin-tànana fohy… dia "kely" ny fari-tanin'ity tànana ity. Ka ara-tsaina dia tsy maintsy mampifanaraka… 1 ″ ianao ary feno fipoahana! Misintona moramora 1/4 ″ fotsiny dia miala eo. Malalaka kely izy io ary misintona ary mivadika mora be… mora loatra amiko, saingy rehefa nandresy izany aho ary nanalefaka ny fikitikitihana ny tanany… moramora dia hitako ny mari-pana sy ny fikorianany.
Ity dia fifampiraharahana lehibe ary ho ahy dia tsara kokoa noho ny faucet farany nataoko io ary raha vao nifanaraka tamin'ny toetran'ny valizy misy valizy aho dia tsapako fa tsara kokoa noho ny faucet an-dakozia lafo vidy efa nosoloiko izy io.
Toa safidy tsara sy mora vidy izy ho an'ireo modely fanta-daza kokoa. Izy io dia miaraka amin'ny fantsom-panafody mifangaro alohan'ny fifandraisana ary koa ny faritra fitehirizana avela hahafahana mifandray hafa raha ilaina izany. Nanaraka ny soso-kevitry ny mpandinika iray teo aloha aho ary nanamarina ny fihenjanan'ny fifandraisana amin'ny fantsona ao anaty fantsona alohan'ny tena fametrahana azy, ary tsy nanome toky aho. Haingana sy mora ny fametrahana ankapobeny. Tena faly tamin'ny fampisehoana aho. Mety mila manamboatra indray ny toerana misy ny lanja tafiditra ianao izay mifatotra amin'ny fantson-drano ao ambanin'ilay fantsom-batana manampy ny fantsom-pivoahana hipetraka foana, saingy fomba tsotra io.
nametraka faucet an-dakozia tsy tambo isaina tamin'ny fiainako, ity hatreto no fametrahana madio sy haingana ary mora indrindra hatramin'izay. raha mbola mitazona ny kalitaony ankehitriny izy ireo dia tsy hanana anarana marika hafa mihitsy. ity dia mamono ny iray amin'ireo faucet ambany vidiny amidin'ny Home Depot na Lowe's. tsara ny fikorianan'ny rano, mandeha tsara ny valizy raha tsy misy gamma mitete mifindra eo anelanelan'ny famafazana sy ny rano mandeha ary tsio-drivotra ary tsara ilay fiatoana kely. Ny soso-kevitro dia ny hanamafisan'izy ireo ny fiarovana ny voanjo. Tena mamporisika anao ihany koa aho mba hanana studs roa sy voanjo elastika hanenjana ny lovia 3-lavaka. raha tsy izany ary tena vokatra Superior amin'ny vidiny tena ambany tokoa.
C D ***2020-07-09
Tiako ny zava-misy fa ilay zavatra dia nofaritana tsara. Ho fanampin'izany, fonosana tsara vita amin'ny fonosana vita am-pandriana izy io. Hita avy hatrany ny lalana tsotra. Ary farany, tsio-drivotra ny fametrahana. Na dia DIYer tsy miraika aza dia tsy ho nahitsy kokoa ny fizotrany. Nankafy ny vokatra farany aho nandritra ny roa andro izao.
M *** ny2020-07-15
Ity dia faucet tena tsara vita amin'ny fahatsapana mafy mafy. Ny fitodihana na ny fantsom-bokatra ary koa ny fantsom-paosiny havanana miankavia dia manome ny habetsahan'ny fanoherana mety tsy toy ny safidy hafa manangana manana kalitao ambany. Ankoatr'izay, ny tsipika rano mafana sy mangatsiaka dia voatsipika vy ary tsy vitan'ny hoe maharitra maharitra kokoa fa tsara tarehy. Ny fametrahana dia tena tsotra, tsotra ara-bakiteny toy izay aseho amin'ny horonantsary vokatra. Ny fitaovana dia misy takelaka fonosana mifanentana raha toa ka manana lavaka 3 ny sinkinao. Kintana 5 mora.
Tiako ity. Napetrako ny faucet vaovao nataoko omaly nanolo faucet Moen 7 taona sarotra vodiana. Nojereko ireo anarana lehibe ary hitako izy ireo nanomboka saika indroa ny vidin'ity singa ity. Mora ny fametrahana. Ny fanesorana ilay faucet taloha dia sarotra kokoa satria ny nuting notapahina dia tena sarotra ny nanatratra ary nitaky wrench faucet. Ny singa vaovao dia tsy ary niditra mora. Ny torolàlana dia voasoratra amin'ny teny sinoa / amerikanina saingy azo takarina. Toa ny marika lafo vidy rehefa vita tsara. hovidiko indray ity.
D *** ny2020-07-26
Somary nisalasala ihany aho tamin'ny famandrihana faucet tamin'ny internet, saingy taorian'ny famakiana hevitra dia nahatsapa ho tsara kokoa tamin'ny fividianana ny WOWOW Faucet aho. Ankizy faly ve aho nanao izany. Nahazo ny faucet avy amin'ny wowow aho, nametraka azy mora foana, mora kokoa noho ny faucet napetrako rehetra. Nanana olana iray aho, fohy ny lalan'ny rano mangatsiaka, fa tsy ny olana WOWOW, ahy ilay izy. Nandefa mailaka tamin'izy ireo aho ary nandefa zana-kazo lava kokoa maimaimpoana sy maimaimpoana ho ahy izy ireo. Vao nametraka azy aho dia tonga lafatra! Mora be! Tianay ity faucet ity fa voaorina tsara, mora diovina ary tsara be! Tena mora ny fametrahana. Ny fantson-tsifotra dia malefaka ary voafehy tsara. All A plus eto!
Nila fantsona lakozia vaovao tsy nampoizina aho. Toa ny zavatra tsara rehetra any Lowe dia $ 200- $ 300. Ny fijerena azy ireo fotsiny dia nahatonga ahy hitebiteby. Nanapa-kevitra ny haka fotoana aho ary hanafatra ity faucet ity amin'ny WOWOW. Natahotra aho fa ho kalitao mora vidy izany. Zalahy dia diso aho! Ity faucet ity dia kalitao tsara, mora apetraka, tonga miaraka amin'ireo singa ilaina rehetra. Tonga tamin'ny alàlan'ny famatsian-drano vaovao, tsy nampoiziko izany! Ny tena tsara kokoa dia ny mijery azy tsara kokoa noho izay hitako tao amin'ny Lowe's, malama sy maoderina kokoa. Taorian'ny nividianako azy dia tsapako fa ny adala ihany no mandany vola an-jatony amin'ny faucet avy amin'ireo magazay lehibe.